Peo Persson Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Peo Person
Peo inyanzvi yekushambadzira yedhijitari ine kumashure mune kubvunza, bhizimusi. Asati abatanidza DanAds muna2013, akabata mamwe mabasa epamusoro munhau uye indasitiri yeIT aine ruzivo rwemakore angangoita gumi achishanda muAd-tech hunyanzvi. Peo aivewo chikamu chechikwata chekutanga cheHybris Empire, dhijitari midhiya uye yekushambadzira kambani.
NeChishanu, Kurume 5, 2021 NeChishanu, Kurume 5, 2021 Peo Person
Zvirongwa zvekushambadzira (iyo otomatiki yekutenga nekutengesa kushambadzira pamhepo) chave chinhu chikuru kunevashambadzi vemazuva ano kwemakore mazhinji uye zviri nyore kuona kuti nei. Iko kugona kwevatengi vezvenhau kushandisa software kutenga kushambadzira kwakashandura nzvimbo yekushambadzira yedhijitari, kubvisa kudiwa kwemaitiro echinyakare maitiro sekukumbira zvikumbiro, tendera, makotesheni, uye, zvakanyanya kutaurirana, kutaurirana kwevanhu. Tsika yechirongwa kushambadzira, kana manejimendi sevhisi chirongwa chekushambadzira sezvazvinombotaurwa,